Athutha deboned izinkukhu inyama - kuyini? athutha GOST izinkukhu inyama ahlukaniswe
Muva nje, emadolobheni amakhulu ayakhula kwezimo ezingezinhle ukuphila komuntu, njengoba kwandisa ezinobuthi imvelo. Ngo yomzimba eqala ukuba ngivule izinqubo umzimba ezihambisana nako nge kwabakhubazekile, ukudla okungenamsoco. Kuyinto umsoco ofanele kuthuthukisa isimiso somzimba sokuzivikela. Zonke lezi zinkinga babe isizathu ekutadisheni ukudla, ikakhulukazi yenkukhu. imikhiqizo Inyama uthenge ithandwa enkulu namuhla emhlabeni wonke. Kuyinto kuwumthombo wamaprotheni, ngakho-ke, idlala indima ebalulekile yokudla komuntu.
Okwamanje, inyama ebomvu kabanzi esetshenziswa ngokwenza imikhiqizo ehlukahlukene. Athutha deboned izinkukhu inyama (okuyinto kuzoxoxwa ngezansi) isetshenziswa ukukhiqiza imikhiqizo Semi-siphelile nge ukunambitheka eliphezulu, umsoco futhi ingubo enhle ukuhweba. Amathambo ne ukusikeka inyama, awasalayo emva lonke imisipha izingcezu ezabonakala, wathumela kucutshungulwe ukudala imikhiqizo Lesisemkhatsini.
Athutha deboned inyama - kuyini?
MMO noma inyama athutha deboned main impahla eluhlaza for ukulungiswa imikhiqizo siphelile kusuka izinkukhu. It ikhiqizwa amathambo umucu isivuno sisiningi kakhulu khona lapho umfutho ophakeme is badabula ngesihlungo, lapho ukugxusha pasty. Kuyathakazelisa ukuthi muva abakhiqizi beqale abonisa ingxenye imikhiqizo MMO, nakuba usebenzisa isikhathi eside ngokwanele. Bona ukufanise yenkukhu, eqinisweni MMO okwengeziwe okunamafutha kanye iqukethe izinsalela osayizi kuze kube yingxenye milimitha.
Yini okufanele ibe inyoni MMO?
Namuhla, indlela lapho imikhiqizo inyama izilawuli GOST. Athutha deboned izinkukhu inyama, + ngokuvumelana nomthetho, kufanele abe ukungaguquguquki nokunamathisela-like viscous, umbala pink noma zibomvu, iphunga fresh. Amathambo MMO akufanele kube khona ukuthi kukhona kunangendlela 0.75 mm, usawoti, sodium nitrite, kanye izinto wesilwane nemifino imvelaphi, ngaphandle yenkukhu, ukungcola kanye nezinye izithasiselo. On endaweni State lapho zindinganiso uyingane yokutholwa, umthetho, imithetho zazo akumele lidlule ekukhiqizeni izinto zokusetshenziswa imikhiqizo Semi-siphelile. Ngakho-ke, ngokuvumelana GOST, athutha deboned izinkukhu inyama (Ukucaciswa kuzoxoxwa ngezansi) akufanele ibe izakhi ezinobuthi. Ngaphezu kwalokho, inani ithambo izinhlayiya akufanele bube ngaphezu kuka-0.3%, nakuba empeleni ngokuvamile kungenzeka ukuthola kufika ku-3%.
Ukulungiselela ukudla boning
Ngaphambi kokuqala inqubo inyama athutha ahlukaniswe ibhalwe. Ukuze lokhu izidumbu eqandisiwe, neengcezu noma amakota incibilikiswa ngu incibilikiswa bese nahlanza kusukela ezingcolisa etafuleni ekhethekile ifakwe kulomsebenzi izakhiwo. Khona-ke izinyoni zazikalwa futhi zayiswa ngqo boning isitshalo lapho futhi ahlukaniswa kwezicubu ezithambile wethambo.
Kanjani boning inyama?
MMO noma athutha deboned izinkukhu inyama (kuyini, vele sesiyazi) ukusebenzisa inkukhu noma turkey izidumbu. Bephathwa ngamasaha namathuluzi womoya. separators ukuthi ochotshoziwe amathambo, zibahlukanise tincenye (onzima ezithambile) asetshenziswa kaningi. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka mass isigamu-owomileyo ube yiziphethu amathambo eqinile futhi imisipha kwezicubu okuyinto isimo pasty ukugxusha. isakhiwo sayo sihlanganisa amafutha, imisipha futhi esikhumbeni, khona-ezicutshini. Lo mkhiqizo esetshenziswa ngokushesha ngemva deboning. Kwimakethe ungathola izinhlobo ezahlukene amadivayisi deboning lokukhanda. Isimiso yomsebenzi wabo - iyona ukwehlukana nabavoti okuqinile (bone), elithambile ngokusebenzisa umfutho ophakeme.
Izinkukhu inyama athutha behlukaniswe ezibekiweko lobuchwepheshe
Imo kumelwe bahlangabezane nezimfuneko lokhu okujwayelekile futhi akhiqizwa ngokuhambisana nemiyalelo zobuchwepheshe. Ukuze kukhiqizwe umkhiqizo esinjalo kufanele kuthathwe kuphela izidumbu izinkukhu, izikhukhukazi kanye turkeys, kanye ozimele zabo, amaphiko kanye ingxenye lumbar-sacral entanyeni. Izinto zokusetshenziswa kufanele kube kuphela inyoni enempilo ukuthi isidlulile luhlolo wezilwane. Emazweni amaningi, ukwenziwa inyama athutha ahlukaniswe setha nezidingo elawula kakhulu. Esinye sezibonelo zalokhu isikhathi izivimbelo isitoreji amathambo esetshenziswa ukuthola Imo - izinsuku kusaba ezingeni lokushisa zero degrees Celsius izinsuku eziyisishiyagalombili noma eqandisiwe.
Kusukela lokho kuncike kwikhwalithi Imo?
athutha Inyama ahlukaniswe (okungukuthi, siye sibuyekezwe ngenhla) kuyoba izinga okusezingeni eliphezulu uma kuhlangatshezwene nakho imithetho ethile. Okokuqala, i-material eluhlaza ehlala ukuba selehlile, okuvumela ukuba abhubhise amagciwane.
Kuyadingeka ukuqapha imishini, isikhathi ukuze bayilungise futhi alole. Inyama mass kumele isetshenziswe ngokushesha noma simisiwe. Inqubo yokuthola Imo ngokwanele inzuzo ngoba ihlinzeka ukukhiqizwa non-imfucuza.
Ngokusho imithetho ethutha imikhiqizo ezigugayo, athutha deboned izinkukhu inyama (okungukuthi, nokuthi ibhalwe, okuxoxwe ngazo ngenhla) kungenziwa uthuthwa iyiphi indlela yokuthutha, ukugcina izidingo yokuhlanzeka. Ngakho, inyama uyiswa endaweni umenzi, + ngokuvumelana nomthetho kwezobuchwepheshe for ukukhiqizwa yayo.
inyama Chilled ka amahora athutha deboned agcinwe ezingeni lokushisa lokususa emibili nengxenye degrees Celsius akuyona ezingaphezu kuka ayisikhombisa nambili ngemuva kokuphela kwenqubo lwaluyophola. Athutha deboned izinkukhu inyama, okungukuthi - ngenhla ukuthi ngaphambili simisiwe akumelwe ligcinwe izinyanga ezingaphezu kuka ezimbili ezingeni lokushisa hhayi ephakeme kunaleyo lokususa nesishiyagalombili degrees Celsius.
Uphenyo inyama athutha ahlukaniswe
Ezitolo nasezimakethe nezitolo ezinkulu kungatholakala ngempela ibanga elikhulu imikhiqizo eqandisiwe kusukela MMO. Ngokusho eziningi izibuyekezo zamakhasimende, bonke azinake ngoba ingasetshenziswa ukupheka ezinye elula ngempela okumnandi. Nokho, ngaphambi kokuba uthenge kufanele sinake umkhiqizo. Ngakho-ke, akufanele ibe nosawoti ezahlukene futhi akhiphe amanyela. EBukhoneni izinsalela, kodwa kungcono uma mkhiqizo eyohlobo. It ingalungiswa kusukela Imo kokubili izifundo lesibili nelokuqala, kanye casseroles, ophaya nokuningi.
Ngakho, siyazi ukuthi kusho ukuthini athutha deboned izinkukhu inyama. Esikhathini sethu, lo mkhiqizo kuvamile impela emhlabeni wonke, njengoba inyama processing yenkukhu kuyinto cishe imfucuza-DRM. Kusukela lulwimi siphelile bapheka ezihlukahlukene, kusukela isobho ukuze casseroles. Futhi kusukela MMO umkhiqizo ayi, okuyinto ububanzi ubanzi kakhulu namuhla.
athutha Inyama ahlukaniswe (okungukuthi, siyazi) iqukethe kufika ku-15% amaprotheni, okwenza kube okunomsoco futhi zithandwa kakhulu abantu ahole indlela yokuphila enempilo. Ngaphezu kwalokho, kuyinto okunama-kilojoule amancane, kutuswa ukusebenzisa ngesikhathi zokusiza kuma ambulensi ukudla. Kuhlanganisa akukho cholesterol, okuyinto embi isimo imithambo yegazi, kukhona inombolo encane kakhulu izinto namafutha, okuyizinto kunzima ukugaya nokuvuselela wamathumbu ukusilaphazeka. Futhi into wokugcina kufanele sinake kuyinto izindleko zokuhlinzwa MMO. Kuze kube manje, lo mkhiqizo inenani ongaphakeme, ngakho iyatholakala cishe njalo owesifazane ofuna ukujabulisa nendlu yakhe kwasemini esiphundu noma dinner.
Indlela ukugcina ukhukhamba fresh: amathiphu
Gourmet umkami ngendlela Bun
Amaqiniso ethakazelisayo ukudla: isobho, sushi, ice cream
Indlela ukukhetha uphayinaphu
"Lacto-Sorbikum": incazelo, yokusetshenziswa
Skull amathambo: komzimba womuntu
Luyini Usuku Umhlaba
Lithuania, Palanga. Aphumule Palanga. emabhishi Palanga
Gravy Inkukhu: zokupheka elula eziyinkimbinkimbi
Ukukhetha isixha lomshado
Ihhotela "Montenegro" Montenegro, Budva Riviera, Becici: ukubuyekezwa. Montenegro Beach Resort 4 *
Esiphundu futhi unempilo ukudla okunama-kilojoule amancane isisindo ukulahleka